China BONOVO China Amphibious Excavator Undercarriage swamp Excavator Marsh Buggy orinasa sy mpamatsy | Bonovo
Ny excavator amphibious dia natao manokana hiasa amin'ny faritra heniheny, tany mando, rano marivo ary terraine malefaka rehetra izay mahay mitsingevana ambony rano. BONOVO pontoon amphibious / salohim-bary noforonina tsara dia nampiharina betsaka tamin'ny fanesorana tanimanga silty, fanesorana ireo hady vita amin'ny silety, fanesorana hazo, heniheny ary fisotroana rano marivo izay misy fetra ny fitrandrahana mahazatra mahazatra.
Miaraka amin'ny ponona amphibious / undercarriage BONOVO dia nanaporofo ny tenanay tamin'ny mpanjifa mahomby amin'ny fanatanterahana ireto manaraka ireto izahay:
1) Fanesorana ny tany honahona any amin'ny faritra fitrandrahana, fambolena ary fananganana
2) Famerenana amin'ny laoniny sy fanarenana ny tany mando
3) Fanakanana sy fanaraha-maso ny tondra-drano
4) Tetikasa fanodinana rano
5) Fanovana ny tany masira-alkaly sy ny vokatra ambany
6) Fanitarana ny lakandrano, fantson-drano ary vavan'ny renirano
7) Fanadiovana ny farihy, morontsiraka, dobo ary renirano
8) Mihady lavaka fametahana sy fametrahana fantsona solika sy gazy
9) Fanondrahana rano
10) Fananganana ala sy fikolokoloana ny tontolo iainana voajanahary
Mpanamboatra manam-pahaizana momba ny vokatra amphibious
Izy Spud sy Hydraulism mekanisma dia ampidirina ao amin'ny pontoon lefitra mihidy, izay apetraka amin'ny lafiny roa amin'ny excavator amphibious. Ny herin'ny herinaratra dia azo ampiasaina hifehezana ny fametrahana amin'ny toerany na ambony-ambany. Ny halavany dia mamaritra ny halalin'ny faritra iasana. Ny spuds dia atsangana rehefa miasa, avy eo ampidiro ao anaty fotaka amin'ny alàlan'ny mekanika hydraulic. Ny fampiasana spuds dia hanatsara ny fitoniana amin'ny fiasan'ny fitaovana amin'ny rano.
Ny Pontoon Retractable dia endri-javatra tokana an'ny BONOVO Amphibious Undercarriage. Midika izany fa ny elanelana dia azo ahitsy eo anelanelan'ny pontoons roa amin'ny faritra iray. Ny taratra misy rafitra fanaraha-maso hydraulic, dia mora ampiasaina amin'ny fiarovana avo lenta. Mandritra ny asa fanamboarana, raha misy ny tontolo iainana tery, ny pontoons eo anelanelan'ny elanelana dia azo ahena kely mandritra ny asa. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny habakabaka dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahamarinan'ny chassis izahay ary manatsara ny fahombiazan'ny asa ataon'ny mpanjifa.
Rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana maharitra ilay rojo, dia hitombo ny pitch noho ny fanaovana bus pin, izay hahatonga ny rojo iray manontolo ho lava kokoa ary hiteraka fandatsahana rojo na malama rehefa mandeha. Hisy fiatraikany lehibe amin'ny fandidiana izany. Ny fitaovana mihenjana dia afaka miantoka ny tsimatra amin'ny rojo sy ny nify mitondra fiara amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny toeran'ny sprocket. Ny fanamafisana ny bolt dia fanaingoana mahazatra ny pontoonantsika. Ny fanamafisana ny varingarina dia mora kokoa noho ny fanamafisana ny bolt, izay afaka manao fanitsiana mandanjalanja ary miantoka ny fandehanana mafy kokoa sy mahomby.
Fanesorana ny honahona any amin'ny faritra fitrandrahana, fambolena ary fanamboarana fanarenana sy fanarenana ny tany mando
Fisorohana sy fanaraha-maso ny tondra-drano Tetikasa fanodinkodinan'ny rano Fanovana ny tanin-saline sy ny tany ambany-vokatra Fanitarana ny lakandrano, fantsakan-drano ary vavan'ny rano amin'ny fanadiovana ny farihy, morontsiraka, dobo ary renirano
Mihady lavaka fametrahan-drano solika sy lasantsy ary mametraka rano
Fananganana ala sy fikolokoloana ny tontolo iainana voajanahary
Parameter Excavator 20T Amphibious
Teo aloha: BONOVO DIGDOG DG25 mpitrandraka mpihady bitika 2.5 tonta mihetsiketsika eto an-tany
am-batana excavator amidy
mpamatsy faritra ambanin'ny tany excavator
faritra fitondra-motera hitachi
faritra mitrandraka ambanin'ny volo
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Chain On R ...
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Rubber Pad ...
Ambongadiny BONOVO Undercarriage Parts Excavator ...